डचटाउन कमिटीहरू - डचटाउनस्टाईल.आर. • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डचटाउन संगठनहरूले छिमेकमा समुदायको नेतृत्वमा सुधारको लागि एक समिति प्रारूप स्थापना गरेको छ। डचटाउन समितिको परियोजना बीचको संयुक्त प्रयास हो डचटाउन मुख्य सडकहरू, को डचटाउन समुदाय सुधार जिल्लार सेन्ट लुइस मुख्य स्ट्रीट्स पहल.
जबकि केहि परियोजनाहरूले डचटाउन CID पदचिह्न वा सेन्ट लुइस मुख्य सडक लक्षित क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुनेछन्, हामी छिमेकका फराकिलो क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्ने परियोजनाहरूमा पनि काम गर्नेछौं। हामी सबै डचटाउनका बासिन्दा र व्यवसाय मालिकहरूलाई तपाईंको रुचि अनुरूप एक वा बढी समितिहरूमा सामेल हुन प्रोत्साहित गर्छौं।
यदि तपाईं पहिले नै साइन अप गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ सिधा साइन अप फारममा जानुहोस्.
सबै समितिहरू pm.० at मा माइक्रोसफ्ट टिम्स मार्फत वा NICstl मा 6२०3207 मेरामेकमा भेला हुन्छन्। तपाइँ तल भेट्ने मितिहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ, वा मा डचटाउन क्यालेन्डर.
डिजाइन समिति समुदाय को प्रामाणिक चरित्र र अन्तरिक्ष को भावना को संरक्षण गर्दा, छिमेकी को भौतिक तत्वहरु मा सुधार मा काम गर्दछ। डिजाइन समिति कला, संरक्षण, सौन्दर्य, र सुरक्षा कभर परियोजनाहरु मा काम गर्दछ। डिजाइन समिति को योजना र काम को अधिकांश उपसमितिहरु को माध्यम बाट गरिन्छसमितिका अध्यक्षलाई सम्पर्क गर्नुहोस् कसरी संलग्न गर्न को लागी पत्ता लगाउन।
आर्थिक महत्त्व समितिले अवस्थित डचटाउन व्यवसायलाई समर्थन गर्दै, छिमेकीमा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गरेर, र उपयुक्त विकासको खोजी गरेर स्थानीय अर्थव्यवस्थालाई विख्यात र? हामी डचटाउनमा लगानी र आर्थिक गतिविधि ल्याउन वर्तमान र सम्भावित व्यवसाय मालिकहरू, आवासीय र व्यावसायिक सम्पत्ति मालिकहरू, र अन्य पक्षहरूसँग काम गर्नेछौं।
प्रत्येक महिनाको दोस्रो मंगलबार साँझ6बजे भेट्छ।
पदोन्नति समिति डचटाउनको मार्केटिंग हात हो। हामी गतिविधि, संस्कृति, वाणिज्य, र सामुदायिक जीवन, मार्केट डचटाउनको सम्पत्ति, र छिमेकीको लागि सकारात्मक छवि विस्तारको बारेमा शब्द बाहिर निकाल्छौं। हामी घटनाहरू आयोजना गर्दछौं, स्थानीय व्यापारलाई प्रमोट गर्दछौं, र एक मजबूत ब्रान्ड र डचटाउनको लागि उपस्थिति विकास गर्दछौं।
प्रत्येक महिनाको दोस्रो बिहिबार साँझ6बजे भेट्छ।
संपर्क: पदोन्नति @dutchtownstl.org
संगठन समितिको लक्ष्य समुदायलाई एकजुट गराउन सहमति र साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न, स्रोत भेला गर्न, र पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्ने छ। हाम्रो समितिले स्वयम्सेवक, कोष सra्कलन, र सञ्चार नेटवर्कलाई एकजुट गर्छ जसले चीजहरू हुन्छ।
प्रत्येक महिनाको तेस्रो म Tuesday्गलबार साँझ6बजे भेट्छ।
डचटाउन समितिहरूले डचटाउन मुख्य सडक र डचटाउन सीआईडीका बोर्डहरूलाई रिपोर्ट गर्छन्। बोर्डहरूले विभिन्न सामुदायिक सरोकारवालाहरूबाट पनि इनपुट खोज्छन्, र सहभागी हुन चाहने जो कोहीले समितिमा सामेल हुन सक्छन्।
साइन अप गर्न तयार हुनुहुन्छ?
तलको फारम भर्नुहोस् र हाम्रो समिति अध्यक्षहरू तपाईंको सम्पर्कमा आउनेछन्।
डिजाइन आर्थिक जीवन्तता संगठन पदोन्नति कुन कमेटीहरुमा तपाईले रुचि राख्नु हुन्छ हेर्नुहोस्
हाम्रो मेलिंग सूचीका लागि साइन अप गर्नुहोस्? हो होइन हामी प्रत्येक महिना केवल केहि ईमेलहरू पठाउछौं।
समितिको लागि साइन अप गर्नुहोस्
कृपया यो फिल्ड भर्नुहोस्।
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो जनवरी 7th, 2022 .
डचटाउन STL.org डचटाउन समितिहरु